नौ वर्ष देखि पुलको जग , निर्माण अलपत्र ! - Dainik Online Dainik Online
नौ वर्ष देखि पुलको जग , निर्माण अलपत्र !
पुल नबन्दा सडक स्तरोन्नतिको काममा समस्या भएको छ । व्यापार÷व्यवसाय गर्न कठिन भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । पुल नहुँदा दुवै जिल्लाका बासिन्दा झोलुङ्गे पुलबाट आउजाउ गर्न बाध्य भएको स्थानीयवासी नरबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । पुलकै कारण चौरजहारी नयाँ शहर निर्माण आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । ठेकेदार राजुप्रसाद श्रेष्ठको चरम लापरवाहीले पुल निर्माण अलपत्र परेको भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताउनुभयो ।
कन्सल्टेन्सीले हचुवाका भरमा पुलको डिजाइन गर्दा निर्माण अलपत्र परेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताउनुभयो । पुल निर्माणका लागि आठ वर्षअघि रु तीन करोडमा लुम्बिनी÷आशिष जेभीले सडक विभागसँग सम्झौता गरेको उहाँले बताउनुभयो । “शुरुमा पुल निर्माणस्थलको भौगोलिक अवस्था र डिजाइनबीच तालमेल मिलेन । पुलको डिजाइन एक र निर्माणस्थलको लोकेशन अर्को हुँदा काम गर्न समस्या भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
डिभिजन प्रमुख झाका अनुसार सडक विभागले उक्त डिजाइनलाई रद्द गरी नयाँ डिजाइन गरिसकेको छ । नयाँ डिजाइन स्वीकृत भए पनि पुरानो दरअनुसार निर्माण गर्न ठेकेदारले नमानेपछि पुलको काम अलपत्र परेको उहाँले बताउनुभयो । “पुरानो दरअनुसार लागत घट्दा निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो । नयाँ डिजाइनअनुसार करिब रु तीन करोडको लगानीमा २५ मिटरको पुल बन्ने लागत उठेको छ ।